Ku Cusub Warbaahinta Khamriga: 10.000 dhalo oo Khamri ah oo ay la socoto CBD Waxaa qoray Franery winery oo caan ka ah magaalada Bordeaux ee caanka ah • Dawooyinka Inc.eu
Cusub oo ka soo baxa saxaafadda khamriga: 10.000 dhalo oo khamri ah oo ay weheliso CBD oo ay ku jirto khamriga Faransiiska ee caanka ah ee Bordeaux
Markii ugu horreysay Faransiiska, ganacsade ka socda gobolka caanka ah ee Bordeaux wine (koonfur-galbeed) ayaa bilaabay isku-darka khamriga CBD, Molikoolaha nasashada leh ee laga helo xashiishka - ganacsigiisu kaas oo qarxay sannadihii la soo dhaafay.
1 Khamriga ugu horreeya ee lala yeesho CBD-da Faransiiska
2 Burdi W khamriga Faransiiska ee leh CBD
3 Rasmi ahaan looma magacaabi karo "khamri"
3.1 Shuruucda khamriga ayaa jira, oo leh xeerar ku saabsan waxa loogu yeeri karo khamri
4 Beddelka khamriga marka loo eego sameeyaha: cabitaanka khamriga la kariyey
Raphaël de Pablo wuxuu adeegsadaa cinjiyadaha Bordeaux iyo weed Bordeaux si loo abuuro cunto karis u qarsoon millennia.
Wakiilka nasashada ee CBD waxaa lagu daraa saameynta qadiimiga ah ee khamriga, ayuu yiri Raphaël De Pablo. Wuxuu ahaa wajiga dadaalkan sida Burdi W - khamri fiican oo leh CBD-ka bilowga - sida la soo bandhigay, oo loogu talagalay inuu "jebiyo xeerarka khamriga ee soo jireenka ah".
Sannadkii 2015, Hervé Delhoofs oo ku takhasusay cilmiga qadiimiga ayaa ka shaqeynayay a qodid oo u dhow Cébazat, oo ah tuulo ku taal badhtamaha Faransiiska, markii uu la kulmay qabri aan caadi ahayn oo taariikhdiisu ahayd qarnigii 2aad waayo, Masiix. Aaggaas waxaa mar degenaa Arverni, oo ka mid ahaa qabiilooyinkii ugu xoogga badnaa ee Gallic xilligii Casriga iyo xilliyadii Roomaanka. Gudaha gudihiisa, waxay ka heleen meydka Gaul 30 jir ah oo lagu aasay qurbaan xabaal ah oo khamri laga sameeyay.
Ilaa hadda, natiijooyinkaas midkoodna uma muuqan wax aan caadi ahayn - illaa saddex sano ka dib, markii cilmi-baaraha iyo saynisyahan Nicolas Garnier ay ka heleen raadadka xashiishka weelka khamriga. "Qaybtan dhirta ah ayaa lagu dari lahaa khamriga si ay u dhadhamiyaan oo ay u siiso saameyn nafsaani ah," Garnier ayaa u sheegay wargayska Faransiiska ee Le Parisien.
Matthieu Poux, oo ah borofisar ku takhasusay cilmiga qadiimiga oo ku takhasusay khamriga qadiimiga ah, ayaa sidoo kale wax laga weydiiyay daahfurka joornaalka sayniska ee Faransiiska ee et et al Avenir. Wuxuu sheegay inuusan la yaabin oo uu sharaxaad ka bixiyay in khamrigu u janjeero inuu si dhaqso ah ugu beddelo khal markaa, sidaa darteed dadkii hore waxay isticmaali jireen waxyaabo lagu daro sida gypsum, biyaha badda iyo waliba xashiish si ay dhadhan fiican u yeeshaan. Dabcan, tani macnaheedu maahan in cabitaanku daruuri u yahay inuu sare u kaco, maaddaama xashiishku u baahan yahay daaweynta kuleylka THC bilaash ah "Laakiin kiiskan," ayuu yiri Poux, "Gauls waxaa laga yaabaa inay raadinayeen saameyntan."
Markii wareysiga Poux uu soo baxay bishii Abriil 2018, nin beeralayda xashiishka ah ee reer France Raphael De Pablo wuxuu ka shaqeynayay warshadaha xashiishadda caafimaadka ee Kanada. Wuu wareersan yahay, wuxuu la xiriiray saaxiib khabiir khamri ah waxayna go'aansadeen inay ka wada shaqeeyaan sidii dib loogu curin lahaa cabitaanka.
Khamriga ugu horreeya ee lala yeesho CBD-da Faransiiska
Khamri-sameeyeyaasha Mareykanka iyo Isbaanishku waxay horay u soo saareen khamri lagu daray xashiishka, laakiin badeecadan ayaa ah tii ugu horreysay ee laga helo Faransiiska, oo ah dhul ay ka baxaan khamri-daaweeyayaasha
Khamriga ugu horreeya ee leh CBD-da Faransiiska (afb.)
Isaga oo jira da'da 28, De Pablo wuxuu la shaqeeyay saaxiib khamri sameeya si uu u helo "isku darka ugu fiican" ee khamriga leh CBD (cannabidiol).
Markaad ku darto maadadan xashiishka, sheyga ugu dambeeya sharci ahaan wuu joojiyay inuu khamri noqdo wuxuuna noqdaa "cabitaan khamri ku saleysan oo la cabiyey".
Hemp loo adeegsaday wax soo saarka ayaa lagu uruuriyay goob uu ka faa'iideystay ganacsadahaani ka dibna Jarmalka ayaa loo diray si looga soo saaro sheyga sheybaarka loo yaqaan 'CBD molecules' ee sheybaarka, falkan oo laga mamnuucay Faransiiska, ayuu yiri De Pablo.
Sharciga Faransiisku wuxuu oggol yahay oo keliya beerashada iyo suuqgeynta fiiqda heersarka ah iyo badarka. Ka-faa'iideysiga caleemaha iyo ubaxa geedka waa mamnuuc.
Laakiin sharciga ma joojinayo inuu beddelo. Bishii Nofeembar 19, Maxkamadda Caddaaladda ee Midowga Yurub (CJEU) waxay ku dhawaaqday iyadoo wakiil ka ah dhaqdhaqaaqa xorta ah ee badeecadaha in Mamnuucida Faransiiska on CBD wuxuu ahaa sharci darro.
Sababtoo ah CBD-da ku jirta xashiishka, si ka duwan maadada 'THC' (tetrahydrocannabinol), wax saameyn ah oo maskaxeed ah kuma lahan maxkamadda Midowga Yurubna uma tixgeliso inay tahay mid daroogo leh.
Xashiishaddayda ayaa laga caddeeyay abuurka ilaa dhammaadka sheyga.
Sidaas waxaa yiri Raphaël De Pablo, oo dhameystay tababar labo sano ah oo ku saabsan soo saarista xashiishada daaweynta ee Kanada.
Burdi W khamriga Faransiiska ee leh CBD
Nidaamka wax soo saar ee Burdi W, oo loo hayo 'sir' si looga fogaado tartanka, wuxuu isku daraa 250 miligram oo CBD ah oo uu la mid yahay canabka Bordeaux 'petit verdot', isagoo isku daraya 'qoraalada currant madow' iyo kuwa xashiishka.
Iyada oo leh calaamadeynta fosforescent iyo xarfaha-daabacaadda ee CBD, dhalada waxaa lagu suuqgeeyaa iyada oo loo marayo maaliyad maalgelinta ka qaybqaadashada. Midkiiba 34 euro, Burdi W wuxuu iibiyey 10.500 dhalo ilaa iyo hadda.
"Runtii waxaa jira suuq," ayuu caddeeyay Raphaël De Pablo, "oo leh amarro badan oo ka imanaya dibadda marka loo eego Faransiiska", maadaama dhalodiisu ay la tartameyso soo saare ka socda Napa Valley oo ku yaal Kaliforniya qiimaheeda "toban jeer ka sarreeya".
Sida laga soo xigtay Ururka Xirfadleyda Xirfadleyda Faransiiska, waddanku wuxuu leeyahay ilaa 400 dukaan oo ku takhasusay iibinta CBD iyo waxyaabaha laga helo sida saliidaha, waxyaabaha la isku qurxiyo, shaaha dhirta, cuntada, ku dhowaad afar laab ka badan noocyadan dukaanno ah marka loo eego tan 2018.
Rasmi ahaan looma magacaabi karo "khamri"
Cabitaankan cusubi waa dhan walba marka loo eego khamri loo sameeyay hababka dhaqanka. Hase yeeshe kuwa sameeya sharci ahaan looma oggola inay ugu yeeraan khamri CBD.
Shuruucda khamriga ayaa jira, oo leh xeerar ku saabsan waxa loogu yeeri karo khamri
Rumayso ama ha rumaysan, sharciga khamrigu waa aag aad u ballaadhan oo sharciga ka mid ah. Tan waxaa ku jira waxyaabo ay ka mid yihiin canshuuraha canshuuraha iyo adeegsiga magacyada gobollada ee baakadaha iyo, sida loo adeegsado CBD-ga lagu shubay Burdi W, xeerarka ku saabsan geeddi-socodka khamriga iyo walxaha.
Tani waxay ka dhigan tahay, sida sharciyada biirka Jarmalka ee xaddidaya waxyaabaha loo oggol yahay biirka, sharciyada khamrigu waxay mamnuucayaan isticmaalka waxyaalaha lagu daro ee ka baxsan liis aad u xaddidan, oo badiyaa shaqeynaya. Marka lagu daro CBD cabitaanka, mar dambe looma magacaabi karo khamri.
Beddelka khamriga marka loo eego sameeyaha: cabitaanka khamriga la kariyey
Haddii CBD-ga lagu shubay Burdi W sharci ahaan looma tixgelin karo khamri, waxay bixisaa beddelaad kale, sida uu sheegay qofka sameeyaha ah.
Sida laga soo xigtay wariye telefishan Faransiis ah oo la kulmay milkiilaha, Burdi W waa khamri aad u qaas ah, maadaama ay tahay tii ugu horreysay ee lagu sameeyo cannabidiol (CBD). Si kastaba ha noqotee, maadaama aysan sharci ahayn in looga hadlo khamriga sidaan oo kale, waa in si sax ah loogu sifeeyaa "cabitaan khamri ah oo la cabiyey".
Sameeyaha, oo ku dhashay Bordeaux, wuxuu xooga saarayaa xaqiiqda ah in si sax ah loo sameeyay "sida khamriga caadiga ah". Intaa waxaa dheer, waxay ka kooban tahay ku dhowaad gaar ahaan Petit Verdot, noocyo canab ah oo ku dhaca tiro aad u tiro badan, laakiin tiro yar, oo CBD-da laga soo saaro hemp-ka dabiiciga ah ee gobolka lagu daro lagu daro si loo sameeyo khamrigan.
Ilaha ay ka mid yihiin hemp (EN), LaMontagne (FR), LeParisien (FR), Ku-xigeen (EN), Dunida Maanta (EN)
Ciyaartoyda ugu sareysa Mareykanka ayaa horumariya CBD
Sababo la xiriira sharciyada wax laga beddelay iyo dib-u-tarjumida heerarka warshadaha, alaabooyin cusub oo kafaala qaad iyo sumado ayaa lagu daray ...
Xashiishadda sharciga ahi waa mid ka mid ah warshadaha adduunka ugu cusub uguna firfircoon. Laga soo bilaabo xilligaas…